Shirar siyaasadeedyo ka bilowday magaalda Nairobi ee dalka Kenya
Waxaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ka socda kulamo gooni gooni ah oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa daneynaya arrimaha doorashooyinka.
Qaar kamid ah musharaxiingta u tartameysa xilka madaxtinimo ee dalka ayaa ku sugan Nairobi kuwaa oo qaar kood ay shaaciyeen iney yihiin musharaxiin u taagan madaxtinimada dalka.
Sidoo kale waxaa jira kulamo gaar gaar ah oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo waxaana la filayaa in itijaah cusub ay yeelato siyaasadda 2021 lagu hagi doono dalka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa kulamo la yeeshay siyaasiyiin ka tirsan kuwa mucaaradka ee jooga magaalada Nairobi iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka Imaaraadka Carabta.
Kulamada ayaa looga hadlay arrimaha doorashada dalka ku soo wajahan sanadka 2020/2021 iyo sidii loo wajihi lahaa, sidoo kale Imaaraadka ayaa doonaya inuu mideeyo cududa mucaaradka si uusan kursiga ugu soo laabanin mar kale Madaxweyne Farmaajo oo aysan isku fiicneyn.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maanta ku sii jeeda dalka Kenya ayaa ku biiraya shirarkaas, sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya Kismaayo.
Deni iyo Axmed Madoobe oo isku arka rag saameyn siyaasadeed leh ayaa doonaya iney sii xoojiyaan isxulufeysiga ka dhexeeya, kadib markii shirarkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee looga hadlay arrimaha doorashooyinka ee 2020/2021-ka ay kaga guuleysteen Madaxweyne Farmaajo, meeshana ka saareen damaciisii ku aadanaa muddo kororsiga iyo doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda dalka.